Otu esi egbochi ma belata mgbake ọrịa rhinitis na ụmụaka | Bezzia
Otu esi egbochi ma belata mgbake ọrịa rhinitis na ụmụaka
Maria Jose Roldan | 26/03/2021 22:00 | Ndị nne ndụmọdụ
Na mbata nke oge opupu ihe ubi enwere otutu ihe nfụkasị nke na eme na otutu ndi mmadu. N'ihe banyere ụmụaka, a maara nke kachasị dịka rhinitis nfụkasị.
Ọnọdụ iku ume a bụ ezigbo ihe iwe maka obere ụlọ ahụ ebe ọ bụ na ọ na-akpata mkpọchi siri ike na imi yana mgbakasị dị ukwuu n'anya. N’isiokwu na-eso nke a, anyị ga-egosi gị usoro ndụmọdụ nke nwere ike inye aka belata mgbaàmà ndị a.
1 Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke nfụkasị rhinitis na ụmụaka
2 Otu esi egbochi mgbaàmà nke rhinitis nfụkasị
3 Esi ewepu mgbaàmà nke rhinitis nfụkasị
Gịnị bụ ihe mgbaàmà nke nfụkasị rhinitis na ụmụaka
Ọnụnọ nke pollen na gburugburu ebe obibi bụ isi ihe kpatara nfụkasị rhinitis na ụmụaka. Ihe nfụkasị a na-eme ka anya mmiri na iwe na anya na ọnụ ọgụgụ imi dị n'oghere imi ya na ụfọdụ akpịrị na-egbu egbu. Ọ bụ usoro mgbaàmà dị iche iche na-ewe ụmụ ntakịrị iwe. n'ihi ya, ọ dị mkpa igbochi ha ma belata ha.
Otu esi egbochi mgbaàmà nke rhinitis nfụkasị
Ọ dị mkpa idebe gburugburu ebe obibi dị ọcha ma dị ọcha ka o kwere mee ya mere ọ dị mkpa iji hichaa ụlọ ahụ dum oge niile.
Kwesịrị izere inwe osisi na-amịpụta pollen na anụmanụ ndị tụfuru ọtụtụ ntutu.
A ghaghị ikuku ụlọ nke nwata ahụ kwa ụbọchị na-asa akwa otu ugboro n'izu.
Zere drafts n'ime ụlọ na oghere nwere oke uzuzu.
Ọ dị ezigbo mkpa ịsa aka nwa gị ọtụtụ ugboro n'ụbọchị, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ na-egwuri egwu n'okporo ámá.
Ezi nri bụ isi mgbe ọ bịara igbochi mgbaàmà nke rhinitis na-arịa ọrịa. Ihe oriri kwesịrị ịba ọgaranya na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị bara ọgaranya na vitamin C. Nri folic acid dị mma iji gbochie mgbaàmà ndị nwere ike ịrịa nke allergies.
Esi ewepu mgbaàmà nke rhinitis nfụkasị
Ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ bụ isi mgbe ọ bịara belata mgbaàmà. A ghaghị inye ọgwụ ọgwụ abụọ na ọgwụ corticosteroid site na ndenye ọgwụ.
Ewezuga ọgwụ ndị a, Can nwere ike ịchọta nke ọma usoro nke usoro ga - enyere aka belata ihe mgbaàmà ndị a:
Hichaa ma hichaa imi nwata ahụ nke ọma site na iji nnu nnu.
Bilie ihe ndina ahụ n’elu akwa iji gbochie imi ka ọ ghara ịbakọta n'imi imi.
Na-eji iru mmiri n’ime ụlọ ọ dị mkpa ma a bịa n’inweta gburugburu mmiri.
Kingụ ọtụtụ mmiri na-enyere imi ka ọ dị nro na enwela oke imi.
Sachaa anya jiri gauze na obere saline solution.
Na nkenke, na mbata nke oge opupu ihe ubi, rhinitis nfụkasị bụ ihe a na-ahụkarị na ụmụaka, ịbụ ihe mgbaàmà nke kwuru nfụkasị ha bụ nnọọ manụ na iru ala. Ọ dị mkpa ka ndị nne na nna mee ihe niile nwere ike igbochi ka nwatakịrị ahụ nwee ike bie ndụ dị ka o kwere mee yana ọ gaghị emerụ ya ahụ rhinitis ahụ e kwuru na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ndị nne ndụmọdụ » Otu esi egbochi ma belata mgbake ọrịa rhinitis na ụmụaka
Kedu ihe bụ usoro obibi obibi na otu esi belata ya
Typesdị mgbidi oriọna dị iche iche iji mee ka akụkụ gị dị ọkụ